Chitubu Mutambo zororo chiziviso
Vadiwa vatengi & Vashandi, Tichatanga zororo redu kubva Kukadzi 6 kusvika Kukadzi 21, uye tichadzoka kuhofisi muna Kukadzi 22nd, 2021 Maita nerutsigiro rwenyu nguva dzese. Vese vashandi vedu veShanghai Dada Electric vangada kukutumirai kwaziso uye ...
2020 Dubai MEE Simba Gen kuratidza
Muchiratidziro ichi, Dada akatungamira zvigadzirwa zvazvino uye matekinoroji uye airatidzira iyo nyowani DAM3 yakateedzana uye iyo MCB NOVA nhevedzano. Isu taigara takapfeka mamask panguva yekuratidzira uye zvakare takagamuchira vatengi vazhinji. Kunyangwe kubuda kwehosha muChina, ...
127th online canton fair yakabudirira kupera
Shanghai Dada akapinda mu127th Canton Fair mu2020 Imwe ndiyo chikuva chitsva. Canton Fair yepamutemo webhusaiti kuratidza zvigadzirwa zvedu. Chechipiri, matekinoroji matsva. Iyo 10 × 24 yakasarudzika yekuparadzira kamuri ine yakazara nzvimbo, kubatana kwakasimba uye kutungamira kunogadzirirwa kuti igadzire live-chiito kushambadzira ini ...
128th Canton Fair Live Nhepfenyuro Chirongwa
Iyo 128th Canton Fair mhenyu zvirimo zviratidze, isu tinopa mamwe emukati masevhisi. Joinha isu kune edu ehupenyu Studio - kukudziridza ruzivo rwekuti maedunhu anotyora maindasitiri anogona sei kubatsirwa mukugadzira. KuvhuraNguva: 2:00 pm China nguva 15th kusvika 24 Gumiguru, 2020 Live studio: DZVANYA PANO Live Live ...
CHII CHINONYANYA PAKATI PEMBB, MCCB, ELCB, UYE RCCB
MCB (diki redunhu mudariki) Hunhu. Rated parizvino kwete kupfuura 125 A. • Thermal kana kupisa-magineti mashandiro. MCCB (yakaumbwa kesi cir ...
YAKANYANYA KESE YEMAHARA DZIDZISO YEMAHARA ZIVO
Iyo yakaumbwa kesi redunhu breaker (MCCB) rudzi rwemidziyo yekudzivirira yemagetsi inoshandiswa kuchengetedza dunhu remagetsi kubva kune akawandisa azvino, izvo zvinogona kukonzera kuwandisa kana pfupi dunhu Iine ratidziro yazvino inosvika kusvika 1600A, MCCBs inogona kushandiswa kune akasiyana siyana ma voltages uye frequency wi ...
MCCB MARKET KUSVIRA
Yakaumbwa Nyaya Yedunhu Rinotyora (MCCB) Musika Wepasi Pese uye Ongororo Yezvematunhu NezveMolded Case Circuit Breaker (MCCB) Maindasitiri Schneider Electric, ABB, uye Eaton yakatora matatu epamusoro emari yemari muMolded Case Circuit Breaker musika muna 2015.Schneider Electric yakatongwa ne18.74 kuziva ...
2020 MEE Dubai inoratidzira (Mira Nha.: H2 C30)
Mune inouya MEE 2020, DaDa anokukoka zvine mutsindo kuti utishanyire panguva yeMiddle East Electricity 2019 pane stand H2.C30 (Kubva Mar. 3 kusvika Mar. 5) kuDubai World Trade Center, ticharatidza mhinduro dzekambani yedu uye tichava nechikwata chedu pa stand kuti ikubatsire nechero ruzivo iwe rwaunoda ...
ne admin pane 20-09-19
Mune iri kuuya 128th Online Canton Fair, DADA inoda kukubatsira iwe kuzadzisa zvinangwa zvako zvekushambadzira nekukupa Uzere uye Rakasika CIRCUIT BREAKER Solution. Iyo Ministry of Commerce: iyo 128th Session yeCanton Fair yakarongedzwa online kubva muna Gumiguru kusvika 24. Vashumiri ...
Thanks yekutishanyira muna 125th Canton zvakanaka
ne admin pane 19-11-10
126th Canton Fair dumba Nha. 11.3K37-38
ne admin pane 19-08-21
Nomutsa kuziviswa kuti mukuuya 126th Canton Fair iyo inobata kuChina, dumba redu Nha nderinotevera: KAMPANI ZITA: Shanghai DaDa Electric Co, Ltd FAIR BOOTH NO: 11.3K37-K38 RATIDZA NGUVA: Gumiguru 15 - Gumiguru. 19 FAIR ZITA: China Canton Fair Kugamuchirwa kuimba yedu yedumba kuti titaure bhizinesi
Iran Simba rekuratidzira
ne admin pane 19-05-17